Tababare Maurizio Sarri oo durba dalbaday laba xiddig & xiddigaha sida hoose loola xiriirinayo marwada duqda ah. – Gool FM
(Turin) 18 June 2019. Tababare Maurizio Sarri ayaa lagu soo warramayaa inuu durba dalbaday laba xiddig, waxaana ku jira Mauro Icardi oo ka tirsan kooxda ay sida weyn marwada duqda ah u xifaaltamaan ee Inter, sidoo kalana waxaa jira dhawr ciyaartoy oo kooxdaan lala xiriirinayo.
Sida laga soo xigtay khabiirka dhanka suuqa ee ka tirsan Sportitalia (Alfredo Pedulla), agaasimaha ciyaaraha kooxda Bianconerri (Fabio Paratici) ayaa doonaya inuu Sarri usoo iibiyo daafac cusub, waxaana lagu soo warramayaa inuu noqon karo Marquinhos.
Si kastaba daafacaan tayada wanaagsan wuxuu sanadkii ka qaataa PSG adduun dhan 10.2 Malyan oo Yuuro, waana lacag xanibi karta heshiis walba, halka Mehdi Benatia ay suuragal tahay inuu soo laabto, balse uma muuqato mid la jecleysanayo.
25-jirkaan reer Brazil ayaa kooxda reer France ku biiray 2013 isagoo adduun dhan 32 Malyan oo Yuuro uga tagay As Roma, saddex sano ayaa kaga haray qandaraaskiisa, balse suuqa ayey kooxdiisa dhigi doontaa hadii ay kooxdiisa 70 Malyan kula wareegto Matthijs de Ligt.
Dhanka kale Old Lady waxaa lala xiriirinayaa daafaca Sassoulo (Merih Demiral) kaas oo lagu qiimeeyo 15 Malyan oo Yuuro, liiska hoose waxaa ku jira Cristian Romero oo ka tirsan Genoa.
60-jirka reer talyaani ee hadda loo dhiibay maamulka Juventus wuxuu aaminsan yahay in Mauro Icardi uu dhalin karo ugu yaraan 40 gool dhamaan tartamada oo dhan.
Tababaraha cusub ee Inter Antonio Conte ayaa xiddigaan u sheegay inuusan wax mustaqbal ah ku laheyn garoonka San Siro Stadium, waxaana suuqa ka baadi goobaya Man United, PSG iyo kooxda Miami FC oo uu leeyahay xiddigii hore qaranka England (David Beckham).